Basket- ball N1A lahy/vavy :: Manjakazaka any Antsiranana ny GNBC sy MB2All • AoRaha
Nizotra tsy nisy nahasakana. Ekipa roa no tsy nisy nahatohitra nandritra ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, taranja basket- ball, sokajy N1A vehivavy sy lehilahy, notante-rahina tany Antsiranana nandritra iny herinandro iny. Fandresena enina tamin’ireo lalao enina natrehiny no azon’ny ekipan’ny Zandarimariam-pirenena (GNBC) sokajy lehilahy, raha nandresy inefatra kosa tamin’ireo lalao efatra vitany ny ekipan’ny Madagascar Basket-ball to All (MB2All).
Samy niondrika teo anatrehan’ny zandary avokoa ny ekipan’ny Cospn, MB2All, Ascut, Sebam, 2BC ary Cnaps. Ny ekipan’ny SBBC, Ankaratra, BC Est ary ny Ascut kosa no lavon’ny vehivavin’ny MB2All. Izy roa ireo no mitarika vonjimaika amin’ireo ekipa nifaninana tany amin’ity fihodinana voalohany ho an’ny fifaninanam-pirenena ity.
Hotanterahina eto Antananarivo, amin’ny 16 – 24 novambra ho avy izao, ny fihodinana faharoa. Hihaona indray ireo mpiray vondrona, mandritra izany. Aorian’ny dingan’ny fifanintsanana dia hiatrika avy hatrany ny ampahefa-dalana ireo ekipa valo voalohany, amin’ireo mpifaninana.
Kitra – THB champions league :: Nitrangana famelezana mpitsara ny lalaon’ ny AS Adema sy FCA Ilakaka
Taratasin’ny mpamily sy ny fiara :: Vonona sady hamoraina ny famoahana ireo karatra biometrika vaovao